Ukuguquka kwesimo sezulu kukhuphule izinga lokushisa koLwandle iTasman cishe ngama-degree amathathu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amagagasi okushisa azokhula ngokuqina futhi avame kakhulu ezingxenyeni eziningi zomhlaba, kepha kulezo lapho esevele ekhona, okungenani izinyanga ezimbalwa ngonyaka, azodala izinkinga eziningi ngokuzayo. Futhi ngukuthi nolwandle olufudumele, kuzoba nzima ukuthola izinhlanzi ezitholakalayo njengoba inani labo labantu lizokwehla, nokuyinto eyenzekile oLwandle iTasman.
Ngesikhathi sehlobo lokugcina eliseningizimu, igagasi lokushisa elingahlali izinsuku ezingekho ngaphansi kwezinsuku ezingama-251, lenyusa izinga lokushisa kwamanzi cishe ngama-degree amathathu, ikakhulukazi, 2,9 ° C. Lokhu kwanda kubangele ukwehla kokukhiqizwa kwamapulazi ama-salmon, kanye nokwanda kokufa kwama-oyster kanye ne-abalone. Njengokungathi lokhu akwanele, kuholele ekufikeni kwezinhlobo eziningi zakwamanye amazwe, ngokocwaningo oluholwa ngusosayensi u-Eric Oliver
Ukufudumala koLwandle lwaseTasman kuleli hlobo eledlule laseNingizimu bekukhathaza kakhulu ngoba kunamarekhodi: kuthinte indawo yolwandle ephindwe kasikhombisa ubukhulu besiqhingi, futhi ngamanani afinyelela ku-2,9 degrees Celsius aphakeme kunokujwayelekile, ukuguquguquka kwesimo sezulu cishe kuyimbangela.
U-Oliver uthe ku isimemezelo »singaqiniseka ngama-99% ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu esine-anthropogenic kwenza lokhu kushisa kwasolwandle kube namandla amaningi kaningana, futhi kwandisa amathuba okuthi le micimbi eyeqisayo izophindwa ngokuzayo.
Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini Nature nokuxhumana, egxile endaweni esogwini olusempumalanga yeTasmania. Igagasi lokushisa kubangelwe yisikhukhula samanzi ashisayo esivela empumalanga ye-Australia, emashumini eminyaka amuva nje ebilokhu iqinisa futhi inweba ibheke eningizimu.
Ngakho-ke, uma kungathathwa izinyathelo zokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu, amanzi azoqhubeka nokufudumala ngokwengeziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kukhuphule izinga lokushisa koLwandle iTasman cishe ngama-degree amathathu